Nea Ɛbɛma Woahu Onyankopɔn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Obiara ntumi nhu Onyankopɔn akwan mu yie.”—Nyansapɛfo Philo a ɔfiri Alexandria; ɔtenaa ase asomafo no bere so.
“[Onyankopɔn ne] yɛn mu biara ntam nware.”—Saul a ɔfiri Tarso na ɔkaa saa asɛm yi kyerɛɛ Atene anyansapɛfo a wɔtenaa ase asomafo no bere so.
ASƐM a Paulo kae ne nea Philo kae yi, nea ɛwɔ he na wogye tom? Sɛ nnipa pii te asɛm a Saul a ɔfiri Tarso a wɔsan frɛ no ɔsomafo Paulo kae yi a, ɛma wɔn koma tɔ wɔn yam. (Asomafoɔ Nnwuma 17:26, 27) Ɛnyɛ wei nko ara ne akomatɔyam nsɛm a ɛwɔ Bible mu. Nhwɛso bi ni: Mpae bi a Yesu bɔe mu no, ɔkaa biribi a ɛmaa n’asuafo no nyaa awerɛhyem sɛ wɔbɛtumi ahu Onyankopɔn, na wɔanya ne nhyira.—Yohane 17:3.
Nanso, Philo ne nyansapɛfo afoforo deɛ na wɔkura adwene foforo. Nea wɔrepɛ akyerɛ ne sɛ, yɛyɛ dɛn araa yɛrentumi nhu Onyankopɔn da efisɛ obiara ntumi nhu n’akwan mu yie. Wohwɛ a, wɔn asɛm no yɛ nokware?
Bible ka no pefee sɛ onipa dasani ntumi nte Onyankopɔn ho biribiara ase nwie da. Ɛho nhwɛso ne sɛ, Ɔbɔadeɛ no te hɔ daa, n’adwene mu dɔ na ne nyansa nni ano; yɛdwene ho sɛ dɛn koraa a, yɛrente ase da. Nea yɛaka yi kyerɛ sɛ yɛrentumi nhu Onyankopɔn anaa? Ɛnte saa koraa; sɛ yɛdwennwene saa nneɛma yi ho a, ɛno mmom bɛboa yɛn ama ‘yɛabɛn Onyankopɔn.’ (Yakobo 4:8) Momma yɛnhwɛ Onyankopɔn ho nneɛma a yɛrentumi nte ase no bi. Afei, yɛbɛhwɛ ne ho nneɛma a yɛbɛtumi ate ase paa no bi.
Onyankopɔn Ho Nneɛma Bɛn na Yɛrentumi Nte Ase?
ONYANKOPƆN TE HƆ DAA: Bible ka sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ “firi mmerɛsanten kɔsi mmerɛsanten.” (Dwom 90:2) Enti, Onyankopɔn nni mfiase, na ɔnni awiei. Yɛbɛtumi aka sɛ, “ne mfeɛ dodoɔ mu nni hwehwɛbea.”—Hiob 36:26.
Mfaso a ɛwɔ so: Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ sɛ yɛhwehwɛ no hu no a, ɔbɛma yɛn daa nkwa. (Yohane 17:3) Sɛ Onyankopɔn nte hɔ daa a, ɛbɛyɛ dɛn na wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛma yɛn daa nkwa? “Mmerɛsanten Hene” no nko ara na ɔbɛtumi ahyɛ bɔ a ɛte saa.—1 Timoteo 1:17.
ONYANKOPƆN ADWENE: Bible ka Onyankopɔn ho asɛm sɛ, “obiara ntumi nhwehwɛ ne nteaseɛ mu nwie” efisɛ n’adwene mu dɔ sene yɛn de. (Yesaia 40:28; 55:9) Ɛdi sɛ Bible bisaa sɛ: “Hwan na wahunu Yehowa adwene [anaa wate no ase, English Standard Version] a ɔbɛtumi akyerɛkyerɛ no?”—1 Korintofoɔ 2:16.
Mfaso a ɛwɔ so: Sɛ nnipa mpempem pii bɔ mpae a, Onyankopɔn tumi tie wɔn nyinaa bere koro mu. (Dwom 65:2) Nkasanoma mpo a wɔnsom bo no, sɛ baako tɔ fam a ɔhu. Wohwɛ a, Onyankopɔn werɛ bɛtumi afiri wo ama wabu n’ani agu wo mpaebɔ so anaa? Dabi, efisɛ n’adwene mu dɔ. Bio nso, ‘wosom bo sene nkasanoma bebree.’—Mateo 10:29, 31.
ONYANKOPƆN AKWAN: Bible ma yɛhu sɛ nnipa rentumi nhu “nneɛma a nokorɛ Nyankopɔn ayɛ no mu firi mfitiaseɛ kɔsi awieeɛ.” (Ɔsɛnkafoɔ 3:11) Enti sɛ yɛkɔ soro ba fam koraa a yɛrentumi nhu Onyankopɔn ho biribiara. Onyankopɔn akwan ne ne nyansa deɛ, yɛrentumi ‘nhwehwɛ mu nwie da!’ (Romafoɔ 11:33) Nanso, Onyankopɔn ayɛ krado sɛ wɔn a wɔhwehwɛ no no, ɔbɛma wɔahu no.—Amos 3:7.
Ɔbɔadeɛ no te hɔ daa, n’adwene mu dɔ, na ne nyansa nni ano
Mfaso a ɛwɔ so: Sɛ wosua Bible a, daa wobɛhu Onyankopɔn ho nneɛma pii na woahu n’akwan yie. Wei bɛma woatumi afa yɛn soro Agya no adamfo daa.
Nea Wobɛtumi Ahu
Onyankopɔn ho nneɛma bi a yɛntumi nte ase no nkyerɛ sɛ yɛhwehwɛ no a, yɛrentumi nhu no koraa. Bible ka Onyankopɔn ho nsɛm pii a ɛbɛboa yɛn ama yɛahu no yie. Wo deɛ, ma yɛnhwɛ emu bi:
ONYANKOPƆN DIN: Bible ma yɛhu sɛ Onyankopɔn wɔ din. Ɔno ara ka sɛ: “Mene Yehowa; me din ne no.” Wokenkan Bible a, wobɛhu sɛ edin biara nni hɔ a ɛpue mpɛn pii sene Onyankopɔn din; ɛpue mpɛn 7,000 wɔ Bible mu.—Yesaia 42:8.
Mfaso a ɛwɔ so: Mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no, ɔkaa sɛ: “Yɛn Agya a wowɔ soro, wo din ho nte.” (Mateo 6:9) Wo nso, sɛ worebɔ mpae a wobɛtumi abɔ Onyankopɔn din. Obiara a ɔdi Yehowa din ni no, Yehowa bɛgye no nkwa.—Romafoɔ 10:13.
ONYANKOPƆN TENABEA: Bible ka sɛ tenabea mmienu na ɛwɔ hɔ; asase a yɛte so yi ɛnna ɔsoro, baabi a honhom abɔde a wɔwɔ honhom nipadua te. (Yohane 8:23; 1 Korintofoɔ 15:44) Sɛ Bible ka “ɔsoro” a, ɛtaa kyerɛ baabi a honhom abɔde te. Enti Ɔbɔadeɛ no “tenabea” wɔ saa “ɔsoro” hɔ.—1 Ahemfo 8:43.
Mfaso a ɛwɔ so: Ɛma wohu sɛnea Onyankopɔn te paa. Ɔbɔadeɛ no nyɛ tumi biara kɛkɛ a ɛwɔ baabiara. Yehowa yɛ Ɔteasefo, na ɔwɔ baabi pɔtee a ɔte. Nanso, “abɔdeɛ biara nni hɔ a ɛnna adi n’anim.”—Hebrifoɔ 4:13.
ONYANKOPƆN SUBAN: Bible ma yɛhu sɛ Yehowa wɔ su ahorow a ɛyɛ fɛ. “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yohane 4:8) Onyankopɔn nni atoro. (Tito 1:2) Ɔnyɛ animhwɛ, ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ, na ne bo kyɛre fu. (Exodus 34:6; Asomafoɔ Nnwuma 10:34) Ɔbɔadeɛ no pɛ paa sɛ ɔne wɔn a wɔsuro no no ‘bɛdi atirimusɛm’ anaa ɔne wɔn bɛfa adamfo. Anhwɛ a, asɛm yi bɛyɛ nnipa pii nwonwa.—Dwom 25:14.
Mfaso a ɛwɔ so: Wobɛtumi abɛyɛ Yehowa adamfo. (Yakobo 2:23) Enti sɛ wobɛhu Yehowa su ahorow no a, ɛbɛma woate Bible no ase yie.
Bible ma yɛhu Yehowa Nyankopɔn yie, enti sɛ obi ka sɛ yɛrentumi nhu no a, ɛnyɛ nokware; Ɔbɔadeɛ no pɛ sɛ yɛhu no. N’Asɛm Bible no ka sɛ: “Sɛ wohwehwɛ no a, ɔbɛma woahu no.” (1 Berɛsosɛm 28:9) Adɛn nti na wonkenkan Bible no nnwennwene ho na ama woahu Onyankopɔn? Bible ka sɛ sɛ woyɛ saa a, Onyankopɔn ‘bɛbɛn wo.’—Yakobo 4:8.
Sɛ wosua Bible a, daa wobɛhu Onyankopɔn ho nneɛma pii na woahu n’akwan yie
Nanso, ebia wobɛbisa sɛ, ‘Sɛ ɛnyɛ biribiara a ɛfa Ɔbɔadeɛ no ho na mɛtumi ate ase a, ɛnneɛ ɛbɛyɛ dɛn na matumi afa no adamfo?’ Susu mfatoho yi ho hwɛ: Sɛ obi nyɛ dɔkota a, ɛno kyerɛ sɛ ɔrentumi mfa dɔkota adamfo anaa? Ɛnte saa koraa! Ɛbɛtumi aba sɛ ɛsono adwuma a nnamfo yi mu biara yɛ, nanso, wɔbɛtumi ayɛ nnamfo paa. Nea ehia ara ne sɛ dɔkota no adamfo no bɛhu ne suban, ahu nea ɔpɛ ne nea ɔmpɛ. Wo nso, wobɛtumi asua Bible no ahu sɛnea Yehowa te, ɛno na ɛbɛtumi aboa ama woafa no adamfo.
Biribiara a ɛho hia sɛ yɛhu fa Ɔbɔadeɛ no ho na ama yɛatumi afa no adamfo no, Bible no ka ho asɛm. Wopɛ sɛ wosua Yehowa Nyankopɔn ho ade pii anaa? Yehowa Adansefo ne nkurɔfo sua Bible a wɔntua hwee. Yɛsrɛ wo, hwehwɛ Adansefo a wɔwɔ wo mpɔtam hɔ ma wɔmmɛboa wo, anaasɛ kɔ yɛn wɛbsaet, www.jw.org/tw.
Onyankopɔn Pɛ Sɛ Ɔne Wo Fa Adamfo
Sɛ wugye Onyankopɔn di nanso wote nka sɛ wobɛn no a ɛrenyɛ yiye a, dɛn na wobɛyɛ?